2016 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Maung Pauk at 9:56:00 AM 0
Xiaomi Lock တွေကို ဖြည်နိုင်တဲ့ Mi PC Tool v2.3.0.4071
Maung Pauk at 10:05:00 PM 0
Xiaomi Lock တွေကို ဖြည်နိုင်တဲ့ Mi PC Tool v2.3.0.4071 ကို Run ပြီး Recovery ကနေထိုး နှိပ်
ဘာလော့ညာလော့တွေပြုတ်တယ် ဆိုပဲ... ကိုရဲလင်းအောင် ပေးတာ...
Credit : Ye Lin Aung
Download Mi PC Tool v2.3.0.4071.exe : 42.69 Mb
Android Tool Phone Application Samsung
Maung Pauk at 9:56:00 PM 0
Combination Firmware ထဲကို အဲဒီ ADB Enabler ဖိုင်ထဲထည့်ပြီး ADB ENABLER.exe လေး Double Click ခေါက်လိုက်ရုံနဲ့. adb enable ပေးမယ့် ဖိုင်ရရှိပါမယ်...
ရရှိတယ့်ဖိုင်ကို Odin မှတဆင့် Flash ပေးလိုက်ပါ...
Credit : Nay Zaw Oo
Download Samsung ADB ENABLER
Maung Pauk at 4:47:00 PM 0
ကျွန်တော့်ဘလော့ www.maungpauk.org ရဲ့ Template ကိုလိုချင်ကြတယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေတို့အတွက် Backup လုပ်ပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... Rar လေးချုံ့ပြီး password လေးတော့ ပိတ်ထားပါတယ်.. Password က www.maungpauk.org ပါ.. ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး.. မောင်ပေါက်ကို သတိရစေချင်လို့ :D
Download Maung Pauk Template
ကား၊ ဆိုင်ကယ်တိုင်း တပ်ဆင်ထားသင့်တဲ့ Myan Track Pro - Multi-Functions Tracker
စားသောက်ဆိုင် နှင့် KTV သုံး ကွန်ပျူတာစနစ် NS_RKTV (Restaurant & KTV Management Software) v2.0
Maung Pauk at 12:16:00 PM 0
- စာရွက်အပိုင်းလေးတွေနဲ့ Table အစုံက မှာသမျှကို လက်မလည်အောင်ရေးပြီး ဘေရှင်းခါနီးကျ Calculator နှိပ်နေတုန်းပဲလား ?
- စားပွဲထိုး (Waiter) က မမှာလို့ ... Chef (စားဖိုမှူး) က မလုပ်မိလို့
Customer ကလဲ သူသေသေချာချာ မှာတယ်ဆိုပြီး မရသေးဘူးလားဆိုပြီး တိုင်ပတ်နေတုန်းပဲလား ?
- (အခုနောက်ပိုင်း အခွန် 5% ပါထည့်တွက်ပေးရလို့) Calculator နှိပ်ရတာ အဆင့်ပိုလာပြီး မှားဖို့ရာခိုင်နှုန်းကလည်း ပိုပိုပြီး များလာပါတယ် ...
၆ သိန်းကနေ ၁၀ သိန်းကျော်အထိ ပေးရတဲ့ Software တွေအပြင်
စက်ပစ္စည်းဖိုးတွေနဲ့ပါ သိန်း ၂၀ ကျော် ကုန်ကျပြီး အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေပါသလား ... ပြင်ဆင်ရ ခက်ခဲပြီး After Sale Service စားရိတ်ကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့် ရပ်လိုက်ရတာမျိုးတွေ ရှိပါသလား ...
-KTV ရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင်အတွက်လည်း KTV Management Software သီးခြားဝယ်ရလို့ အပိုကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်နေလို့ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ KTV အတွက် လွယ်ကူ အဆင်ပြေတဲ့ Software တစ်ခုကို ဈေးသက်သက်သာနဲ့ မျှော်လင့်နေပါသလား..
ဒီအတွက် အားလုံး OK စေမယ့် မြန်မာ Developer ကတစ်ယောက် ရေးသားထားတဲ့ Customized Software တစ်ခုရှိပါတယ်...
New Star Myanmar က ထုတ်လုပ်တဲ့ NS_RKTV (Restaurant & KTV Management Software) ပါ...
စားသောက်ဆိုင်အတွက်ရော၊ KTV အတွက်ပါ ဒီ Software တစ်ခုနဲ့ပဲ လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ Management လုပ်နိုင်ပါတယ်..
Waiter မှ ကောင်တာသို့ အမှာပြ
ကောင်တာမှ Kitchen သို့ အော်ဒါပေးလိုက်သည်နှင့် Kitchen ပရင်တာမှစာရွက်ထွက်လာမည်
Kitchen မှ Ready ဖြစ်လျှင် စလစ်နှင့်တကွ Waiter ကိုအပ်
စလစ်ကို ဖတ်၍ Waiter မှ Customer ၏ Table သို့အရောက်ပို့
ငွေရှင်းလျှင် ပြေစာအား ကောင်တာမှ ပရင်တာဖြင့်ထွက်
KTV ဆိုလျှင် ၀င်ထွက် (Session) ချိန်နှင့် ကျသင့်ငွေပါအလိုလျောက်တွက်ချက်ပေးလိုက်မည်ဖြစ်သည်
Stock ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ (စည်မှ ဂျား … (ဆေးလိပ်) ဘူးမှ ပွဲ စသဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်မည်
စားသောက်ဆိုင်အတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး ကုန်ကျစရိတ် အသက်သာဆုံးနဲ့
ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုထိ တပြားမှ မပေးရပဲ အခုပဲ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး ကွန်ပျူတာမှာ စမ်းသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ် ... နှစ်သက်လို့ ဝယ်သုံးမယ်ဆိုလည်း ဈေးနှုန်းက သောင်းဂဏန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်.. ၀ယ်ပြီးနောက်ပိုင်းလည်း ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ် ... ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် ..
၀ယ်ပြီးနောက်ပိုင်း တပြားမှ မကုန်မယ့် .....
NS_RKTV (Restaurant & KTV Management Software) ကို ....
အောက်ပါလင့်ခ်ကနေ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပြီး စမ်းသပ်သုံးစွဲနိုင်ကြပါပြီ..
Ph : 09972884080 (Hot Line - Viber Available)
Download NS_RKTV 2.0 : 14 Mb
Samsung FRP Lock ကို ဖြုတ်ဖို့ Flyer SAM FRP Full Version
Maung Pauk at 3:01:00 PM 0
Samsung FRP Lock ကို ဖြုတ်ဖို့ Flyer SAM FRP Full Version ဖြစ်ပါတယ်.. Adb သိဖို့လိုအပ်ပါမယ်.. rar မဖြည်ခင် Antivirus ကို Disable လုပ်ထားရပါမယ်.. ကီးအတွက် Key Gen ပါပါတယ်...
ဖိုင်ကိုတော့ Nay Zaw Oo က Free Release တင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်..
Mobile Software Advance
Download Flyer SAM FRP : 3.5 Mb
Ye Naing at 11:48:00 AM 0
Ye Naing at 11:09:00 AM 0
Code name / ငယ်အမည် ဂွတိုအတွက် ဂွက်ထော် Firmware တင်ရင် အဆင်မပြေတတ်ပါ။
သို့သော် ဂွတို၊ ဂွက်ထော်၊ ၀ိုင်းစိန် တို့အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေစေသော Universal Firmware များ
| aries | Mi 2
| pisces | Mi3- TD
| cancro | Mi3/ Mi4- LTE/WCDMA
| ferrari | Mi 4i
| libra | Mi 4c
| aqua | Mi 4s
| gemini | Mi 5
| virgo | Mi Note
| leo | Mi Note Pro
| scorpio |Mi Note 2
| hydrogen | Mi MAX 32gb
| helium | Mi MAX Pro (64gb/128gb)
| lithium | Mi MIX
| capricorn | Mi 5s
| natrium | Mi 5s Plus
| mocha | Mi Pad
| latte | Mi Pad 2
| HM2013023 | Redmi 1 - WCDMA
| armani | Redmi 1S - WCDMA
| HM2014811 | Redmi2- WCDMA
| HM2014813 | Redmi2- TD
| ido | Redmi 3
| land | Redmi3S/X
| omega | Redmi Pro
| lcsh92_wet_jb9 | Redmi Note 1 / 3G-MTK
| gucci | Redmi Note 1S
| dior | Redmi Note 1 / 4G
| hermes | Redmi Note 2
| hennessy | Redmi Note3(MTK)
| kenzo | Redmi Note3(Qualcomm) / Redmi Note3Pro
| kate | Redmi Note3Special
| nikel | Redmi Note 4
Ye Naing at 10:52:00 AM 0
နေ့စွဲ (Date) ကို ကြည့်ပြီး အောက်ဖေါ်ပြပါ Date တွေနှင့် တိုက်စစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
2012051 => MI 1S (WCDMA)
2012052 => MI 1S YOUTH
2012053 => MI 1SC (CDMA)
2012061 => MI 2
2012062 => MI 2C
2012121 => MI 2A (WCDMA)
2013012 => MI 2S (WCDMA)
2013021 => MI 2SC (CDMA)
2013028 => HM 1SC
2013029 => HM 1SW
2013061 => MI3(TD-SCDMA)
2013062 => MI 3W (WCDMA)
2013063 => MI 3C (CDMA)
2013121 => Redmi Note 3G
2014021 => HM NOTE 1 LTEW
2014022 => HM NOTE 1LTETD
2014215 => MI 4W (WCDMA)
2014216 => MI 4LTE-CMCC
2014218 => MI4(CDMA)
2014616 => MI NOTE LTE DUOS
2014618 => MI NOTE (LTE-CMCC)
2014619 => MI NOTE LTE DUAL
2014712 => REDMI NOTE 4G (GLOBAL)
2014715 => HM NOTE 1LTEW
2014716 => MI 4LTE-CT
2014719 => MI 4LTE-CU
2014811 => HM 2LTE-CU
2014812 => HM 2LTE-CT
2014813 => HM 2LTE-CMCC
2014816 => HM 2A
2014817 => HM 2LTE-SA
2014818 => Redmi MI 2
2014910 => HM NOTE 1S CT
2014911 => HM NOTE 1S CMCC
2014912 => HM NOTE 1S CU
2014915 => HM NOTE 1S CMCC
2014916 => HM NOTE 1S CT
2015015 => MI 4I (LTE DUOS)
2015021 => MI NOTE PRO (LTE DOUS)
2015022 => MI NOTE PRO (LTE DUAL)
2015112 => REDMI NOTE3(LTE DUAL)
2015201 => MI5LTE DUAL
2015561 => MI 4C LTE DUAL
2015628 => MI5LTE DUAL
2015712 => Redmi Note 2
2015716 => MI PAD 2
2015811 => REDMI3LTE DUAL
2015817 => REDMI3LTE DUAL
2015911 => MI 4S LTE DUAL
2016001 => MI MAX LTE DUAL
2016007 => MI MAX LTE DUAL
2016030 => REDMI 3S LTE DUAL
2016033 => REDMI 3X LTE DUAL
A0101 => MI PAD
MI1 => MI-ONE
MI1C1 => MI-ONE C1
MI1-YOUTH => MI1-YOUTH
Thiha Htike at 3:07:00 PM 0
Thiha Htike at 11:21:00 AM 0
Firmware Phone Application Xiaomi
Thiha Htike at 11:20:00 AM 0
Remin Note4ဟီး
Firmware ရေးပြီးသေနေတာ တွေလိုပါ
Preloader လေးဖြုတ်ရေးကြပါ ဆရာတို့
File Password > myanmarxda
Gmail and Gtalk နည်းလမ်းများ
Maung Pauk at 7:41:00 PM 0
Gmail တစ်ခုဟာ အလကားရတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီ gmail နဲ့ပဲ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တကယ်အသုံးပြုလာတဲ့အခါ သိပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ gmail တစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်.. ကိုယ့် gmail ကို အခြားမသမာသူတွေ ထိုးဖောက်ရယူသွားတဲ့အခါမျိုး၊ ကိုယ့် gmail ကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ကိုယ့် gmail မှာ လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ သိထားရမယ့် အချက် ၉ ချက်ကို ယေဘုယျ အားဖြင့် ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
1. What was the last password that you remember (must have)?
ကိုယ့်အီးမေးကို ဝင်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးမှတ်မိတဲ့ Password ကို မသိမဖြစ် သိထားရပါမယ်..
2. When was the last time (month, date, and year) you were able to sign in to your Gmail account (must have)?
ကိုယ့်အီးမေးကို နောက်ဆုံး ဝင်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ရက်စွဲ ( လ/ရက်/ခုနှစ် ) ကို မဖြစ်မနေ သိထားရပါမယ်..
3. When did you (month and year) create your Gmail account (must have)?
ကိုယ့်အီးမေးစတင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ လ နဲ့ နှစ်ကိုတော့ မဖြစ်မနေ သိထားရပါမယ်..
4.What was the answer to your security question?
အီးမေးဖွင့်ခါစက လုံခြုံရေးမေးခွန်း အနည်းဆုံး ၃ ခု မေးခံရပါတယ်.. အဲဒီထဲမှာ တစ်ခုခုလောက်ကိုတော့ ကိုယ်ဘယ်လို ဖြေခဲ့သလဲ မှတ်မိရပါမယ်..
5.E-mail addresses of up to5frequently emailed contacts.
ကိုယ်နဲ့ အကြိမ်ရေအများဆုံး ဆက်သွယ်ဖူးတဲ့ အီးမေး ၅ ခုကို သိထားရပါမယ်..
6.Name of up to4labels.
ကိုယ့် အီးမေးမှာ အနည်းဆုံး Folder4ခုနှင့်အထက်ကို နာမည်မတူအောင် တည်ဆောက်ထားရပါမယ်.. gmail ဖွင့်တုန်းက ပါလာတဲ့ Folder (Label) တွေနဲ့ မတူတဲ့ Folder နာမည်တွေ ဖြစ်ရပါမယ်..
7.What was the first account recovery e-mail address that you remember?
ကိုယ့်အီးမေး စတင်ဖွင့်စဉ်က ထည့်ခဲ့တဲ့ recovery email ကို သိထားရပါမယ်..
8.Name up to4other Google products that you were using with your Gmail account and also the approximate date (month and year) you started using them.
Google ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေထဲက အနည်းဆုံး ၄ မျိုးနဲ့အထက် ကို ကိုယ့်အီးမေးနဲ့ ဘယ်တုန်းက စတင်သုံးစွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကို မှတ်မိရပါမယ်..
9.Phone numbers that you may have associated with your Google account.
ကိုယ့် အီးမေး ဖွင့်တုန်းက ဘယ်ဖုန်းနံပတ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာကို မှတ်မိရပါမယ်..
အပေါ်က ဖေါ်ပြထားတဲ့ အချက် ၉ ချက်ကတော့ ကိုယ့်အီးမေးသုံးစဉ်တစ်လျှောက်လုံး သတိထား မှတ်သားရမယ့် အချက်တွေဖြစ်ပြီး တစ်စုံတစ်ခုကြောင့် အီးမေးကို အခြားသူတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုအတွက် ကိုယ့်အီးမေးကို အလွယ်တကူ ပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ ပေးပါလိမ့်မယ်...
Christ Leo at 4:02:00 PM 0
ထုံးစံအတိုင်းGo to LAYOUT > Click ADD WIDGET
Choose HTML/Java Script widgetကိုရွေးပြီးအောက်ကCodeလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါဗျာ။
Christ Leo at 3:32:00 PM 0
ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဘလော့မှာGoogle Map ထည့်နည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
<!-- crawlist.net map starts-->
<iframe width="300" height="300" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?q=4100, agrabad,chittagong, bandladesh&layer=tc&t=m&z=10&source=embed&output=svembed"></iframe>
<!-- crawlist.net map ends-->